Faith ee iniin khardal ah | Apg29
Sida aynu ka qayb qaadan kartaa in la aaminsan yahay dheeraad ah, weyn iyo iimaan ka xoog?
Waxa kale oo jira dad badan oo dadka Ilaah qaba aragti in iimaanka way xoog badan tahay lkn wax la haleeli ka mid ah. Laakiin sidaas maaha oo dhan. Waan arki doonaa in Kitaabka in ay muujinayso waxa rumaysadkiinnu waa.
Kitaabku waxa uu ka hadlayaa waxyaabo badan oo ku saabsan rumaysadkiinna iyo baahida loo qabo in la qaato iimaanka. Masiixiyiin badan doonayaan in ay Iimaan si ay u koraan, si ay iimaanka helo weyn iyo xoog. Waxa suurto gal ah in ay la kulmaan.
Waxa kale oo jira dad badan oo dadka Ilaah qaba aragti in iimaanka way xoog badan tahay lkn wax la haleeli ka mid ah. Laakiin sidaas maaha oo dhan. Waan arki doonaa in Kitaabka in ay muujinayso waxa rumaysadkiinnu waa. Waxaan akhriyey KJV, Cibraaniyada. 11: 1:
"Laakiin rumaysad waa xukun waxyaalaha la rajeeyo, iyo xaqiiqaynta waxyaalaha aan la arkin."
Faith ma aha male ah, malo ah ama loo maleeyo in mid ka mid ma aha arrin hubi. Faith leeyahay waxba kuma laha dareenka jirka, sida waannu og nahay wax la maskaxdeena.
Inta aynu nidhaahno: "Waxaan qabaa in sidaa iyo sidaa yahay, laakiin waxaan hubaa in aan ahay." Halkan yimaado male ah, laga yaabee waxaan Malo ahayn ama wararka la isla dhexmarayo. Rumaysadku waa wax gabi ahaanba ka duwan, wax adag, gabi ahaanba ammaan ah. Rumaysadku waa trust a ee ballammadii Ilaah ee dembiga lagu runta ah waxa aan la arki karo. In aayadda 3 ayaa sheegay in this:
"Rumaysad ayaynu ku garanaynaa in duniyooyinka lagu abuuray erayga Ilaah, sidaas daraaddeed muuqaalka looma samayn out of waxa aan arki karnaa."
Rumaysad u hesho aragti iyo waxgarasho. Mid ka mid ah fahamsan by iimaan. Faith ka baxsan adduunka in la arki karo in ay indhaha iyo gaadho galay xaqiiqada dhabta ah ee ka danbeeya la arki karo ee. Waxaan ka akhri: "Rumaysad ayaynu ku garanaynaa." Waa runta. Laakiinse dadkii toobadla'aanta u jeesanaynaa oo dhan, oo wuxuu leeyahay, "Iyada oo maanka, waxaynu rumaysan nahay." Waa wax soo saarka ka mid ah dareenka jirka iyo "dareen caadi ah" ee caadiga ah.
Sida aynu ka qayb qaadan kartaa in la aaminsan yahay dheeraad ah, weyn iyo iimaan ka xoog? Kitaabku waxa uu yidhi:
"Faith ka yimaadaa maqlidda erayga Ilaah."
Rumaysadku wuxuu ka yimaadaa marka aan dhagaysan baridda Kitaabka markii la gashado by wacdiya kuwaas oo uu leeyahay aragti qoto dheer galay ereyga Ilaah. Faith sidoo kale yimaado by reading badan ee Kitaabka Quduuska ah hanuun Ruuxa Quduuska ah ee. Subkidda Ruuxa Quduuska ah ayaa by fog macalinka ugu wanaagsan Kitaabka Quduuska ah. At akhriyey hadalka, waxaa muhiim ah in si gaar ah diiradda saaraan ballamada, waayo, Ilaah wuxuu nagu yidhi, waxay uu tahay, oo wuxuu u ballanqaaday uu heysta. Waxaad u leeyihiin in ay si dhab ah ugu cuslaataan ballamada ee Kitaabka Quduuska ah, waayo, waxay naga kaxayn.
Ibraahim wuxuu ahaa nin rumaysad xoog leh. Rabbigu wuxuu isaga siiyey yabooha wiil, kuwaas oo ahaa ay adagtahay nafleyda. Laakiin waxa uu arki karin wax aan macquul aheyn oo weli aaminsan yihiin in waxa ay ahayd oo gebi ahaanba suurto gal ah. Waxaan isakoo akhriyo ka nuBibeln, Rome. 4: 18-22:
18 "Inkasta oo waxaa jiray aan rajo lahayn, Ibraahim kasta iyo fikirka la rajeeyo, iyo si uu dhalay uu yahay aabbe u ahaa quruumo badan, sida lagu yidhi, 'Sidaas badan oo kalaa farcankaagu ahaan doonaa.'
19 Sidaas daraaddeed Ibraahim ma kagama in ay Iimaan, inkastoo uu ahaa qiyaastii boqol sano jir ah una Maleeyeen in jidhkiisa itaalna kuma jirin, iyo in kastoo ay naagtiisii ​​Saarahna ayaa marnaba awoodin in caruur leedahay, iyo hadda waxa ay ahayd oo kaliya ka gaboobay.
20 Isagu marnaba shakiyey rumaysanayn Ballankii Ilaah, waayo, rumaysad isaga siiyey xoog, oo wuxuu u sharrifnay Binii Ilaah.
21 Isagu wuxuu ahaa si buuxda u qanciyay in Ilaah ku samayn kartaa wax kasta wuxuu u ballanqaaday,
22 oo waxaa isaga loogu tiriyey xaqnimo. "
Haddii aan soo qaadanno Ibraahim tusaale, waxaan aragnaa fursad u barakaysan, iimaanka sii kordhaya. In 1917 tarjumaadda u qornaa sidan:
"... waxa uu ahaa halkii ay ka xoog ay iimaanka, isagoo Ilaah ammaanaya ... "
Si sharaf Ilaah waa hab si aad u hesho iimaan xoogan. Laakiin markaas ammaanta Rabbiga oo jidka saxda ah. Waxaad ma aan samayn karo sida uu sheegaayo in Isaiah. 29:13 (nuBibeln):
"Dadkani waxay ii soo dhowaadaan, hadalkooda iyo igu maamuusaan, oo afkooda, Laakiin qalbigoodu waa iga fog yahay, oo cabsida Ilaahna waa la kaliya bartay ee ragga."
Ay timaado wadnaha ayaa ku lug leh in lagu sharfa Ilaah naftiisa la, fikirkan, hadalladiisa iyo falimihiisana. Waxaa Ibraahim.
xertii ayaa hal mar oo Ciise weyddiiyey isagoo si ay Iimaan ugu dacaayad. "Rumaysad noo kordhi," waxay ku yidhaahdeen. Ciise ayaa ugu jawaabay, Matt. 17:20:
"... Runtii waxaan idinku leeyahay, Haddaad leedihiin rumaysad iniin khardal le'eg, waxaad buurtan ku odhan this, Halkan ka dhaqaaq oo halkaas tag, wayna dhaqaaqi doontaa,. Oo waxba ma kari waayi doontaan for"
Wax loo Yaboohay in ereyga Ilaah, ama faa'iido u ah carruurta Ilaah waa wax aan macquul aheyn kuwa rumaysad iniin khardal ah. iimaanka runta ah Eebehoodna tala saarta oo dhan in ereyga Ilaah shaaca ka qaaday iyo doonistiisa.
Ciise ayaa la siiyey ballan qaad cajiib leh in John. 14:12
"Runtii, runtii, waxaan idinku leeyahay, Kii i rumaystaa, in sidoo kale shuqullada aan sameeyo kuu samayn doonaa;. Oo shuqullo kuwan ka waaweynna wuu samayn doonaa, maxaa yeelay, waxaan si Aabbahay tag"
Tani waxay ka dhigan tahay in ay suurto gal tahay kuwa rumaysadka run ah iyo Ciise oo dhan in ay sameeyaan shuqullo ah in uu, oo ka awood badan xittaa uu sameeyey. Ma waxbaa la ah, wax la haleeli? at dhan ma! By dhagaysto wacyigaliyo Ruuxa ka buuxo wax ku barayay oo aad ka akhrisan iyo Word waxbarasho Ilaah ka faa'iidaysan karaan aaminsan noocan oo kale ah ee.